नारायणहिटि अगाडी नेकपाको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीको आँखाबाट आँशु,किन बने ओली भावुक ? « Kalakhabar
नारायणहिटि अगाडी नेकपाको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीको आँखाबाट आँशु,किन बने ओली भावुक ?
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, २३ माघ २०७७ २०:१६
२३,माघ–काठमाण्डौं । नेकपाको बागमती प्रदेश केन्द्रिय कमिटीले आयोजना गरेको बिशाल सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रम्मा प्रधानमन्त्री ओलीले आँखाबाट आँशु झारेका छन् । सम्बोधन गर्दा गदै ओली भावुक बनेका छन् । नारायणहिटी अगाडि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कार्यकर्ताले चर्को हुटिङ दिएपछि ओली भावुक बनेका थिए । चर्को स्वरमा बोल्दाबोल्दै एक्कासी गला अवरुद्ध भएपछि ओली केहीबेर चुप लागेका थिए । उनले कार्यकर्तालाई केही कुरा मात्र भन्न बाँकी रहेको बताउदै चर्को हुटिङ रोक्न ईसारा दिई रहेका थिए ।
उनले गला अवरुद्ध भयो भन्दै आँखाबाट पनि आँसु झरेछ भन्नुभयो । कार्यकर्ताको चर्को हुटिङले ओली भावुक बनेको र आँखाबाट आँशु झारेको महशुस गरिए पनि उनले भने चिसोले आँशु आएको बताए । ओलीको आँखाभरी आँसु आएपछि सहयोगीहरु मञ्चमै पुगेका थिए । त्यस पछि उनले आँसु पुछेर पानी खाएका थिए । जनताले आफूलाई पाँच बर्ष शासन गर्न पठाए पनि केही प्रतिक्रियाबादी र बिखण्डनबादीले काम गर्न नदिई उल्टै पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउन खोजेको बताए ।
आधिकारिक पार्टी को भनेर कसैलाई भ्रम छ भने आजबाट त्यो भ्रम्मा नपर्न पनि आग्रह गरे । आफूहरुको कार्यक्रमलाई बिफल बनाउन प्रचण्ड माधव पक्षले तर्साउन नेपाल बन्द गरेको पनि बताए । दीन दुखीहरुको तरकारी पोखाएको,पसल बन्द गरेर गरिबको दैनिक हातमुख जोड्ने बाटोमा पनि कुचेष्टा गर्दै सवारी साधनमा क्षेती पुरयाएको आरोप लगाए । त्यो सबैको जिम्मेवारी लिदै आफ्नो सरकारले सबै क्षेतीपूर्ती दिने पनि उनले जानकारी गराए ।
अब कुनैपनि जनता भोकले नमर्ने पनि उनले बताए । आफ्नो सरकारले ठूला ठूला भिविन्न आयोजना निमार्ण गरेको र नेपालको सबै भन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको पनि बताए । पूर्व रेलवेई,पश्चिम रेलवेइ सम्झोता भई सकेको र अब छिट्टै नै एक घण्टामा केरुङ पुग्न सकिने पनि उनले बताए ।
अब नेपाली जनताको चेतनाको स्तर बढेकाले कसैले पनि लोकतन्त्र खोस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । उनले सम्बोधनको क्रममा भने–“कसैले कुनै हिसाबले लोकतन्त्रलाई केही गर्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रको भविष्य सुदृढ र उज्ज्वल छ किनकि नेपाली जनता सचेत छन्, यहाँ कसैले पनि लोकतन्त्रलाई केही गर्छु भनेर नचिताए हुन्छ । लोकतन्त्रतर्फ कर्के आँखा नलगाए हुन्छ । प्रतिगमन नसोचे हुन्छ । यो देश अब अघि बढ्यो, बढ्यो । नेपाललाई समाजवादोन्मुख तथा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको देश बनाउन कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै उनले निराश नभएर एकताबद्ध भई देश विकासमा लाग्यौँ भने कसैले पनि आफूहरुलाई रोक्न नसक्ने दृढता व्यक्त गरे ।